ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံတွေကို စိတ်တိုင်းကျပြန်စစ်နေတဲ့ သမီးလေး Ivy ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးကို ပြသလိုက်တဲ့ အေသင်ချိုဆွေ – Cele Snap
December 5, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပေါက်တဲ့အိုး သီချင်းနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားထဲကို ရေပန်းစားလာခဲ့ပြီး တစ်ကိုယ်တော်စီးရီး.. ပြန်ဆိုတေး သီချင်းများနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ထားသူလေးဖြစ်ပါတယ်. ငယ်စဉ်ကတည်းက ပရိသတ်တွေချစ်ခဲ့ရတဲ့ အေသင်က ခုဆိုရင်ချစ်စရာသမီးလေးတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သမီးလေးတို့မေမေ ဖြစ်လို့နေ ပါပြီ..
အေသင်ကို ချစ်လာကြတဲ့ ပရိသတ်များကလည်း အေသင့်သမီးလေး အိုင်ဗီလေးကိုလည်း ဆက်လက်ချစ်လို့နေပြန်ပါတယ်နော်… ခုလို ရှုတ်ထွေးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် ပရိသတ်တွေအားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း အဖြူအမဲသဲကွဲသွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်. အချို့အနုပညာရှင်တွေကလည်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ မရပ်တည်ရဲဘဲ တိတ်ဆိတ်နေ တာတွေကြောင့် ပြည်သူများရဲ့ ဝေဖန်ခြင်းတွေကို ခံခဲ့ရသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
အဲဒီအထဲကမှ အေသင်ချိုဆွေကတော့ မိမိရဲ့ ခံယူချက်ကို ရဲရဲတင်းတင်း ရပ်တည်ခဲ့လို့လည်း စကစ ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အေသင်က အိမ်ထောင်ရေးကံမကောင်းခဲ့ပေမယ့် မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ကို အပြည့်အဝယူခဲ့ပါတယ်နော်။ အေသင့်မှာနောက်ထပ်ချစ်ရမဲ့ချစ်သူရရှိနေပြီဆိုတာလည်း ပရိသတ်ကြီးလည်း အသိဖြစ်မှာပါနော်… ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကြောင့် အခုလက်ရှိ လက်တွဲဖော်ရဲ့ ချစ်ခင် ဂရုစိုက်ခြင်းတွေ ကို အပြည့်အဝရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။…
ခုဆိုIvyလေးကအရမ်းလဲစကားတွေတတ်နေသလိုအရမ်းလဲချစ်ဖို့ကောင်းနေပါပြီ၊မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်း၊ဝကစ်လေးမို့အရုပ်လေးလိုလှနေတဲ့Ivyလေး၊အဒေါ်ဖြစ်သူမေသင်ချိုဆွေရဲ့FoodVlogတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်းအဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့Vlogလေးရိုက်ခဲ့တာပါ၊ Ivyလေးရဲ့FoodVlogလေးကမထင်ရလောက်ကိုကြည့်ရှု့သူများခဲ့ပါတယ်…ဒီနေ့လေးမှာလည်း Ivy လေးက ရိုက်ကွင်းမှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေကို စိတ်တိုင်းကျ ပြန်စစ်နေတဲ့ ချစ်စရာကောင်း တဲ့ ပုံလေးတွေကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်…….ပရိသတ်ကြီးလည်း အေသင့်တို့ကိုလည်း ချစ်ပေးကြပါအုံးနော်…
Source: IVy .
ပရိသတျကွီးရေ.. ပေါကျတဲ့အိုး သီခငျြးနဲ့ ပရိသတျတှကွေားထဲကို ရပေနျးစားလာခဲ့ပွီး တဈကိုယျတျောစီးရီး.. ပွနျဆိုတေး သီခငျြးမြားနဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြကို သိမျးပိုကျထားသူလေးဖွဈပါတယျ. ငယျစဉျကတညျးက ပရိသတျတှခေဈြခဲ့ရတဲ့ အသေငျက ခုဆိုရငျခဈြစရာ သမီးလေးတဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သမီးလေးတို့မမေေ ဖွဈလို့နပေါပွီ..
အသေငျကို ခဈြလာကွတဲ့ ပရိသတျမြားကလညျး အသေငျ့သမီးလေး အိုငျဗီလေးကိုလညျး ဆကျလကျခဈြလို့နပွေနျပါတယျနျော… ခုလို ရှုတျထှေးနတေဲ့ နိုငျငံရေးအခွအေနကွေောငျ့ ပရိသတျတှအေားပေးတဲ့ အနုပညာရှငျတှကေလညျး အဖွူအမဲသဲကှဲသှားခဲ့ရပွနျပါတယျ. အခြို့အနုပညာရှငျတှကေလညျး ပွညျသူတှနေဲ့အတူ မရပျတညျရဲဘဲ တိတျဆိတျနတောတှကွေောငျ့ ပွညျသူမြားရဲ့ ဝဖေနျခွငျးတှကေို ခံခဲ့ရသူတှလေညျး ရှိကွပါတယျ။
အဲဒီအထဲကမှ အသေငျခြိုဆှကေတော့ မိမိရဲ့ ခံယူခကျြကို ရဲရဲတငျးတငျး ရပျတညျခဲ့လို့လညျး စကစ ရဲ့ဖမျးဆီးခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ အသေငျက အိမျထောငျရေးကံမကောငျးခဲ့ပမေယျ့ မိခငျတဈယောကျရဲ့ တာဝနျကို အပွညျ့အဝယူခဲ့ပါတယျနျော။ အသေငျ့မှာနောကျထပျခဈြရမဲ့ခဈြသူရရှိနပွေီဆိုတာလညျး ပရိသတျကွီးလညျး အသိဖွဈမှာပါနျော… ကုသိုလျကံအကြိုးပေးကွောငျ့ အခုလကျရှိ လကျတှဲဖျောရဲ့ ခဈြခငျ ဂရုစိုကျခွငျးတှကေို အပွညျ့အဝရရှိနတော ဖွဈပါတယျနျော။…
ခုဆိုIvyလေးကအရမျးလဲစကားတှတေတျနသေလိုအရမျးလဲခဈြဖို့ကောငျးနပေါပွီ၊မကျြလုံးဝိုငျးဝိုငျး၊ဝကဈလေးမို့အရုပျလေးလိုလှနတေဲ့Ivyလေး၊အဒျေါဖွဈသူမသေငျခြိုဆှရေဲ့FoodVlogတှကေိုစိတျဝငျစားရငျးအဒျေါဖွဈသူနဲ့Vlogလေးရိုကျခဲ့တာပါ၊ Ivyလေးရဲ့FoodVlogလေးကမထငျရလောကျကိုကွညျ့ရှု့သူမြားခဲ့ပါတယျ…ဒီနလေ့ေးမှာလညျး Ivy လေးက ရိုကျကှငျးမှာ ရိုကျထားတဲ့ပုံလေးတှကေို စိတျတိုငျးကြ ပွနျစဈနတေဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပုံလေးတှကေို တငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော…….ပရိသတျကွီးလညျး အသေငျ့တို့ကိုလညျး ခဈြပေးကွပါ အုံးနျော…
ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော်တွေဖျော်ဖြေတဲ့ ရှိုးပွဲကို သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို လိုက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ်